Nhau - Chii chinonzi Biodegradable zvinhu
Tsanangudzo ye bioplastics: kana mapurasitiki ari bio based, iwo anotsanangurwa se bioplastics, biodegradable, kana ese ari maviri. Bio base inoreva kuti icho chigadzirwa (chikamu) chinobva ku biomass (chirimwa). Bioplastics inobva muchibage, nzimbe kana cellulose. Iyo biodegradation ye bioplastics inoenderana nekemikari yayo chimiro. Semuenzaniso, 100% bio yakavakirwa, bioplastics hazvireve kuti inogona kuora.
Mapurasitiki anogadzirwa nehutachiona mapurasitiki anogona kuora nekuita kwezvinhu zvipenyu, kazhinji hutachiona, kupinda mumvura, kabhoni dhayokisaidhi, uye biomass.
Kunyange mazwi ekuti "bioplastic" uye "biodegradable plastiki" akafanana, haana kufanana. Haasi ese bioplastics anogadziriswa.
Biodegradation inzira yemakemikari umo tupukanana tudiki tunowanikwa mune zvakatipoteredza zvinoshandura zvinhu kuita zvinhu zvakasikwa senge mvura, kabhoni dhayokidhi uye manyowa (pasina zvekuwedzera zvekuwedzera) Iyo biodegradation maitiro anoenderana nemamiriro akapoteredzwa mamiriro (semuenzaniso nzvimbo kana tembiricha), zvinhu uye mashandisirwo.
Kubudirira kwebioplastics nhasi
Rimutsiridzwa simba mapolymers anogona kuganhurirwa starch mapuroma, polylactic acid (PLA) PHB polyhydroxyalkanoates (PHA) cellulose ma polymers.
Kuburitswa kwepasi rose kwebioplastics kuchave kuri mamirioni 2.11 ematani muna 2019 uye mamirioni 2.43 ematani muna 2024, inotarisirwa kuwedzera zvishoma. Inofananidzwa nekubuditswa kwepasirese kweanopfuura mamirioni makumi matatu nemakumi mashanu nepfumbamwe pagore / toni yemapurasitiki, ichiri kuverenga chikamu chidiki. Zvakafanana mapurasitiki ekupakata (akaomarara uye akasununguka) akatonga pasirese bioplastics yekugadzira kugona, iine inopfuura hafu (53%) mumusika wese webioplastics gore rapfuura.
Pfungwa iri kumashure kweiyo bio based polymers ndeyekutsiva fossil kabhoni nezviwanikwa zvinowedzerwazve uye zvakatipoteredza (shuga muzvirimwa), mune mamwe mazwi, kugadzira mapolymers kubva kuzvinhu zvinowanikwazve zviwanikwa, uye kukurumidza kuora kurongedza nekudzokera kune zvakasikwa.
Zvigadzirwa zvedu zvese zviri 100% zvinogadziriswa zvigadzirwa, inova EN13432, ASTM D6400, BPI, FDA, yakatenderwa.
Compostable Garbage Bags, Biodegradable Cling Kuputira, Biodegradable Inotambanudza Firimu, Compostable Bags, Eco Cling Kuputira Shuga Kuputira, Biodegradable Compostable Marara Mabhegi,